Showing ५१-६० of १४९ items.
बिउ १ किसानको भाग्य र भविष्य हो । बिउबिना किसानले न त फलको कल्पना गर्न सक्छ न त रोपणको । किसानका लागि बिउ नै सबथोक हो । बिउ गतिलो भइदिएन भने उब्जनी शून्यमा पुग्छ । जसले मेहनत मात्रै खेर जाँदैन, उसको सपना पनि तुहिन्छ । उसले आफैले बनाएको रैथाने बिउ नासिएमा फेरि त्यस्तै बिउ उत्पादन गर्न सक्दैन । नेपालमा धेरै रैथाने बिउहरू हराउँदै गएका छन् । उचित संरक्षणको अभावमा बिउहरु लोप भऐका हुन् । यस्तै प्रकृतिको घटना झापाको बिर्तामोडमा भएको छ । किसानले राम्रो उब्जनी गर्ने अभिलाषाले मेहनतका साथ लाखौं खर्चिएर भण्डारण गरेको बिउ कुहिएको छ । सञ्चालकको लापरवाहीको सिकारमा किसानहरु परेका छन् । बिर्तामोडस्थित रोयल को
आधा काम गरेर पूरै रकम पचाउनेलाई उम्कन दिनु हुँदैन
थालेको काम पूरा नगरी पूरै बजेट निकासा गर्नु अख्तियार दुरुपयोग हो । आर्थिक अपचलन वा भ्रष्टाचार हुनु हो । जनप्रतिनिधि, प्राविधिक, प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी बीचको मिलोमतोमा यस्ता अपारदर्शी आर्थिक अपचलनले मुलुकलाई गाँजेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकास्थित तीन सामुदायिक वनमा भएको आर्थिक हिनामिनाले छर्लङ्ग पारेको छ । पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–१ स्थित शान्ति सामुदायिक वन, वडा नं. २ को चौतारी र १० को पशुपति सामुदायिक वनमा तीनवटा पोखरी निर्माण गर्नका लागि प्राप्त २५ लाख रुपैयाँ बजेट दुरुपयोग भएको छ । निर्माण सम्पन्न नगरी समितिले निर्माण सम्पन
आरक्षण प्रशासनले स्थायी समाधान खोज्नु पर्दछ
प्रदेश १ मा विदेशी पर्यटकहरु तान्ने एक मात्र गन्तव्य कोशी टप्पु वन्य जन्तु आरक्ष पर्छ । सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीसँग सिमाना जोडिएको आरक्षमा एसियामै दुर्लभ मानिएका अर्ना र विश्वमै बढि(४८४) प्रजातीका चरा यहाँ पाइन्छ । र यहाँ हात्तीहरु पाइन्छन् । चराको राजधानी, अर्ना र हात्तीको वासस्थानको रुपमा विदेशीलाई बखान गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन सकरात्मक पाटो हो । ती अर्ना, हात्ती तथा विभिन्न जंगली जनावरबाट एक थरी मावन आनन्तसँगै अर्थोपार्जन गरिरहेका छन् भने अर्काथरी मानव तीनै जनावरबाट आजित भएका छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयका लागि ती जनवार ठूला दुस्मन भएका छन् । ती जनावरको उचित व्यवस्थापन गरेर सिमानाका नाग
एनआरएनको समीक्षा जरुरी
काठमाडौंमा तीन दिनदेखि एनआरएनएको सम्मेलन जारी गरेको छ । विवाद र असहज परिस्थितिका कारण सम्मेलन लम्बिएको छ । विभिन्न देशबाट झण्डै २६ सय प्रतिनिधिहरू नेपाल आएका छन् । यसले आर्थिक रूपमा नेपाललाई नोक्सान छैन । भ्रमण वर्ष २०२० को पूर्वसन्ध्यामा एनआएएनले नेपालमा विश्व सम्मेलन गर्न छनौट गर्नु सकारात्मक कुरा हो । नेपाल र नेपालीहरूकै एजेण्डामा छलफल र भलाकुसारी हुने सम्मेलन नेपालमा हुँदा लाखौंको डलर नेपाल भित्रिएको छ । सम्मेलनको सकरात्मक बाटोलाई हेर्दा नेपाललाई माया गर्ने हजारौं प्रवासीहरूलाई एक ठाउँमा पाएको मात्र छैन, उनीहरूसँगै अर्थ पनि भित्रिएको छ । यसले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन पनि भएको छ । तर यस व
कर प्रणालीलाई अनलाइन गर
यस बेलामा कर कार्यालयहरू नागरिकले भरिभराउ हुने गरेका छन् । असोज मसान्तसम्म कर तिरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी नियमका कारण पनि करदाताहरू कर कार्यालयमा पुग्ने गरेका छन् । नामै कर, बाध्यकारी नियम झैं लाग्ने करलाई सहज बनाउन अहिले पनि राज्यले त्यसखालको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । कर कार्यालयमा यहाँ जा, त्यहाँ जा जस्ता झन्झटिला प्रक्रियाका कारण जनताले राहत हैन, आहत महसुस गरिरहेको अनुभूति गर्न सकिन्छ । कर तिर्न निकै झन्झटिलो रहेको सेवाग्राहीहरूले प्रतिक्रियाले नै त्यो पुष्टि गर्दछ । त्यसै पनि कर तिर्नका लागि नेपालीहरूलाई बानी परिसकेको छैन । भरसक कर नै तिर्न नपरोस् झैं गर्ने नेपालीहरूलाई यस्ता झन्झटिला
नेपालीहरूको ठूलो चाड दशैं भर्खरै सकिएको छ भने दोस्रो ठूलो चाड तिहार नजिकिंंदै छ । आफ्नो दैनिकी चलाउनका लागि रोजगारी खोज्दै देश र विदेशका विभिन्न ठाउँमा पुग्नु धेरै नेपालीको नियती हो । अरु बेला चारतिर छरिएर रहेका नातागोता पनि दशैं, तिहार, छठजस्ता चाडका बेला एक ठाउँमा जम्मा भएर रमाइलो गर्ने चलन छ । यसरी आफन्तसँग भेट गर्न, आर्शीवाद थाप्न यात्रा गर्दा विशेषतः टाढाबाट घर फर्किनका लागि नेपालीहरूले यातायातका सञ्चालकबाट ठगिनु परेको छ । सरकारले नियम कानून बनाएर दूरीअनुसार विभिन्न ठाउँको गाडी भाडा तोकेको छ तर यातायात व्यवसायीहरू सरकारी नियम मान्दैनन् । बरु यो मौकामा कसरी बढी कमाउन सकिन्छ भनेर मनलागी भाड
कर्मचारीको समस्या सुल्झाऊ
नेपालीहरूको घर आँगनमा यति बेला दशैंले प्रवेश पाएको छ । दशैंलाई एउटा उत्सका रूपमा मनाउन सबै नेपाली जनहरू आ–आफ्नो हिसाबले जुटेका छन् । दशैलाई सांस्कृतिक उत्सवका रूपमा मनाउन कामको सिलसिलामा टाडा रहेका घर परिवारका व्यक्तिहरू घर फर्कने गर्दछन् । घर परिवारसँग भेटघाट गर्न आशीर्वाद लिन वर्ष दिनसम्म भेट नहुनेहरूबीच भेटघाट गर्ने एउटा अवसरको रूपमा दशैलाई उपभोग गरिँदै आएको छ । दशैं मनाउन अगाडिदेखि जोहो गर्ने पनि नेपाली परम्परा छ । घर परिवारमा नयाँ लुगा किन्ने मिठो मसिनो खाने, आफन्त इष्टमित्रसँग भेटघाट गर्ने यो चाडको मुख्य विशेषता नै यही हो । निश्चय नै कुनै पनि व्यक्ति आफूले श्रम गरेको कार्यालयबाट त
प्रकाशित मितिः आश्विन १७, २०७६
महरा बलात्कार आरोप प्रकरणः निष्पक्ष छानविनकाे वातावरण बनाइयाेस्
यो वर्ष विश्वभरका मिडियामा ‘मी टु’ अति चर्चित रहे । हलिउड नगरीमात्रै होइन, बलिउड नगरीमा पनि मी टुले ठूलै तहल्का ल्यायो । केही अभिनेतामाथि सङ्गीन आरोप लागे । तर, पुष्टिका आधारहरु अहिले पनि तयार भएका छैनन् । मी टुको चर्चा केही ओभाउन नपाउँदै नेपालमा पनि मी टुकै झल्को दिने गरी घटनाले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमका पानाहरु तातेका छन् । हो, हामी सभामुख कृष्णबहादुर महराको कुरा गरिरहेका छौं । द्वापरयुगमा पनि कृष्णको लीलाहरु हामीले प्रशस्तै सुन्दै आएका थियौं । १६ सय गोपिनीलाई माया जालमा पार्न सफल ती कृष्णको लीला व्यासद्वारा लिखित महाभारतको पानामा पनि सुरक्षित छ । त्यो त द्वापरयुगको एउटा मा
निष्पक्ष अनुसन्धान होस्
बीपी प्रतिष्ठानको गरिमा बचाऔं
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विशेषगरी पूर्वक्षेत्रका बिरामीहरूको चाप दैनिक बढिरहेको छ । प्रतिष्ठानकै तथ्याङ्कअनुसार बीपीमा उपचार गराउन दैनिक ३ हजारको हाराहारीमा बिरामीहरू आउँछन् । तर केही समययता बीपी प्रतिष्ठान आफै बिरामी अवस्थामा छ । प्रतिष्ठानका अङ्गहरू भङ्ग भएका छन् । टाढादेखि निको हुने आशामा आएका बिरामीले झन् बढी सास्ती खेप्नुपरेको अवस्था छ । प्रतिष्ठानलाई सुधार्ने सक्षम नेतृत्वको अभाव देखिएको छ । प्रतिष्ठानमा अहिले समस्यै समस्याको जञ्जाल छ । महत्वाकांक्षी योजनाअनुरूप बन्दै गरेका भवनहरू अलपत्र छन् । प्रतिष्ठान आफैले सञ्चालन शुरु गरेको फार्मेसी बन्द अवस्थामा छ । हरेकजसो विभाग